घर » दौड » ट्रान्सफर्मर ट्रक
खेल जानकारी: ट्रान्सफर्मर ट्रक
विवरण: ट्रान्सफर्मर यहाँ तपाईं अमेरिकी सैन्य आधार माल को सबै प्रदान गरेर तिनीहरूलाई मदत गर्न सक्छौं भने हेर्न, को मानिसलाई मदत र हाम्रो दौड सुरक्षित गर्न हो। Autobots रोल आउट!
खेल्नु: 206,278 ट्याग: ट्रांसफार्मर, रोबोट, ट्रक
तपाईँले आफ्नो गन्तव्य पुग्न आफ्नो बाटो खडा भएको अवरोध बीचमा धातु शहर उडान एक साहसिक सामना गर्न रोबोट बायोनिक मद्दत गर्नुहोस्। किनभने एक विफलता र आफ्नो मिशन असफल हुनेछ मुर्ख चिनो छैन।
तस्विर पहेली समाधान गर्न लेने, स्पिन वा खाली: ट्रान्सफर्मर खेल प्ले ट्रांसफार्मर प्रधानमन्त्री पहेली खेल र छनौट3विकल्प पहेली।
ट्रांसफर्मर buble मौरी उद्धार मिशन
तपाईं मुक्त लागि आफ्नो ब्राउजर मा ट्रांसफार्मर Buble मौरी उद्धार मिशन खेल्न सक्छन्। ट्रांसफार्मर Buble मौरी उद्धार मिशन: bumble मौरी autobots संग लडाई समयमा गम्भीर चोट पायो, आफ्नो खुट्टा भाँचिएको छ। Sam ट्रक उहाँलाई tows र ल्याउन खोज्छ।
आफ्नो काम, श्री जम्पिङ रोबोट, प्रत्येक स्तर मार्फत हाम फाल्ने र यस्तो आफैलाई एक मिसिन लागि समस्या हिज्जे सक्ने केहि परहेज गर्दा चमकिलो नीलो ब्लब सङ्कलन छ। यो हप!
ट्रांसफार्मर: Optimus को फिर्ती
ग्रह शान्ति फेरि भङ्ग गरिएको छ। यो समय autobots बलियो शत्रुलाई सामना गर्नेछ। autobots यो अपरिहार्य युद्ध लड्न जाँदैछन् तापनि अप्टिमस autobots र मानव जगतले दुवै को यो मातृभूमि रक्षा प्रतिज्ञा गर्नुभएको छ। रमाइलो गर! प्ले Retur
doraemon: रोबोट भूमि
Doraemon र Nobita जहाँ धरती विनाशकारी शक्ति रोबोट द्वारा आक्रमण छ भविष्यमा रोमांचक छ। Nobita र Doraemon नियोग रोबोट्स शूटिंग गरेर पृथ्वीमा बचाव छ छ, तिनीहरूलाई यो मिशन पूरा गर्न मद्दत गर्छ।
ध्वनि र Akako अब agains एक ट्रक मा प्रत्येक अन्य रेसिंग छन्, आफ्नो ट्रक sellect र प्ले सबै अचम्मको 10 स्तर र वास्तविक विजेता बन्न।
ट्रांसफार्मर Showdown खेल
को Autobot अप्टिमस प्रधानमन्त्री रूपमा प्ले र Decepticons फिर्ता लड्न! आफ्नो हतियार तिनीहरूलाई तल गोली, पैसा संकलन, आफ्नो हतियार स्तरवृद्धि र शत्रुहरूको छालहरू फिर्ता पकड गर्न समाप्त गर्न अगाडि धक्का!
चरम ट्रक diefo
डिएगो तपाईं, उहाँले आफ्नो लक्ष्य पुग्न बाटोमा बाधा र अवरोध मार्फत मा सार्न हुनेछ एक सुपर जीप प्रयोग चार पाङ्ग्रा आफ्नो मिशन पूरा गर्न चाहनुहुन्छ भने दृढ बढाउने हुनेछ
ट्रांसफार्मर प्रमुख बरफ दौड
तपाईं अप्टिमस प्रधानमन्त्री हुनुहुन्छ र यो दौड बाटो र घटता सावधान रहनुहोस् देखि ऊर्जा game.Get जीत।
ट्रांसफार्मर प्रमुख भूत शिकारी
यो मिशन ट्रान्सफर्मर प्रधानमन्त्री यो ग्रह उम्कन बाटो खोज्न छ। ट्रान्सफर्मर प्रधानमन्त्री आफ्नो बाटो मा सबै राक्षस नाश मद्दत गर्नुहोस्।
बेन 10 विदेशी बम ट्रक
बेन 10 तिनीहरूलाई गिर बाहिर संग सडक को अन्त गर्न बम अनुरक्षण मदत
रोबोट युद्ध: खेल
तपाईं जीत सबै रोबोट हार, रोबोट युद्ध मा हो
ट्रांसफार्मर क्रिसमस दौड
क्रिसमस दिन। अप्टिमस प्रधानमन्त्री गरेको मोटो प्रयास र झर्ने बिना अवरोध कूद। नियन्त्रणमा रहनु र बाँण कुञ्जी प्रयोग गरी उच्चतम स्तर मारा।
राक्षस ट्रक प्रेत हत्यारा
हास्यास्पद भौतिकी खेल, जहाँ आफ्नो गन्तव्य पुग्न गर्न लाश मार्फत आफ्नो राक्षस ट्रक ड्राइव।
राक्षस ट्रक प्रेत कोल्हू
यी पाठ्यक्रम भन्दा यो राक्षस ट्रक ड्राइभ, तर तपाईं प्राप्त गर्न बाहिर आ ती horrid लाश लागि बाहिर हेर्न! तिनीहरूलाई तल लिनुहोस्!
ट्रांसफार्मर allspark लडाई
लड्न यसको समय! को decepticons संसारको लिन प्रयास गर्दै हुनुहुन्छ। आफ्नो मनपर्ने autobot छान्न र हाम्रो ग्रह सुरक्षित छ सम्म3स्तर मार्फत decepticons लड्न! तपाईं जारी बटन क्लिक गर्न सक्नुहुन्छ भने, खेलको ताजा प्रेस F5 प्रमुख
को bumble मौरी को ट्रांसफार्मर उडान
Decepticons एक दल भमरा एक घाटी लुकेर फन्दामा छन्। जीवित छ, भमरा Energon को एक विशाल रकम सङ्कलन र आफ्नो Decepticon शत्रुहरू एक एक गरेर पराजित गर्ने शक्ति प्रयोग गर्नुपर्छ।
हाम्रो चंद्र-आधार रक्षा र विदेशी रोबोट गुँड नष्ट! आकस्मिक खेलाडीहरू र कट्टर व्यक्तिहरूको बचाउको मोड लागि अभियान मोड।
बेन 10 बनाम rex ट्रक च्याम्पियन
rex विरुद्ध आफ्नो ट्रक र जाति ड्राइभ र नयाँ स्तर, राम्रो किस्मत अनलक गर्न 1st ठाउँमा स्तर समाप्त।
Spongebob सूक्ष्मजीवहरूको2विस्फोट
Spongebob फिर्ता उहाँले सूक्ष्मजीवहरूको र अन्य राक्षस भरिएको छ कि दुनिया उहाँको ट्रक र यात्रा चलाउनु छ जहाँ अर्को ठूलो साहसिक छ। आफ्नो प्राथमिक मिशन जेली पकड र सबै राक्षस मार्ने छ। ट्रक G प्रयोग गर्दा पैट्रिक मारा
ट्रांसफार्मर मरुभूमि दौड
तपाईं, मरुभूमि अवरोध र बालुवा ramps मार्फत दौड त्यसपछि यो खेल मा अप्टिमस प्रधानमन्त्री छन् तपाईं अन्त सम्म ड्राइव र बम रोड संग बाँच्न सक्नुहुन्छ? प्ले र सबै स्तर जीत अन्य स्तर अनलक!
ट्रांसफार्मर बाइक सवारी
तपाईंले यो खेल मा अप्टिमस प्रधानमन्त्री छन्। , को moutain मार्फत यस चुनौतीपूर्ण यात्रा लिन एक Harley-डेभीडसन मोटरबाइक चढेर र सबै स्तर पूरा गर्ने प्रयास गर्नुहोस्।
ध्वनि द्वीप भर घन्टी संकलन गर्न एक ट्रक चढेर छ। उहाँले टापुमा साँघुरो र cracky बाटोमा ट्रक चलाउनु हुनेछ। केही कुरा मा, ध्वनि पनि एउटा पहाड मा ट्रक सवारी छ। तिनलाई पार गर्न राम्रो ट्रक नियन्त्रण गर्न मद्दत
राक्षस ट्रक साहसिक 3D
फास्ट pacing 3D दौड खेल। आफ्नो राक्षस ट्रक मा संसारभरि यात्रा, सबै भन्दा राम्रो प्रतिद्वन्द्वी विरुद्ध दौड जित्न प्रयास गर्नुहोस्।
नौकर सुपर ट्रक
नौकर ड्राइभिङ सुपर ट्रक Gotham शहर को ट्रयाक मा चुनौतीहरू हटाउन मदत
नौकर ट्रक 3
यो caped Crusader नौकर खतरनाक ड्राइभमा फिर्ता छ! उहाँले परीक्षण यो सुन्दर ड्राइभिङ खेलमा उत्कृष्ट वाहन को आफ्नो नयाँ छिटो ड्राइव रूपमा सबै स्तर मार्फत गाढा नाइट ड्राइव मद्दत गर्नुहोस्।
आक्रोशित चरा सुपर दौड
आक्रोशित चरा आफ्नो बाइक मा सबै मिशन पारित मदत!
हामी अहिले आफ्नो मदत चाहिन्छ। बेन 10 आफ्नो ग्रीन ऊर्जा डाक्टर Russ पराजित गर्न बढयो दि्छ सङ्कलन गर्न आवश्यक छ। आफ्नो एटीवी मा जानुहोस् र सङ्कलन गर्न सुरु गर्नुहोस्। समय सकिँदै छ!
बेन 10 परमाणु ट्रान्स्पोर्टर
बेन 10 को मित्र, वेन र केविन कब्जा थिए र फिरौती हाम्रो किशोर नायक एक धेरै खतरनाक परमाणु शुल्क पूरा भनेर खलनायक माग। बेन 10 अब उहाँले औं परिवहन गरेर सबै ठीक चरणमा पूरा हुनेछ फेरि आफ्नो मित्र हेर्न चाहनुहुन्छ भने
पावर Rangers मोटोक्रस
पावर रेंजर आफ्नो मोटरसाइकल मा अवरोध हटाउन प्रयास गरिरहेको छ। तिमी उसलाई 21 स्तर पारित र जीत मदत गर्न आफ्नो dexterity कौशल प्रयोग गर्नुहोस्।
ट्रान्सफर्मर यहाँ तपाईं अमेरिकी सैन्य आधार माल को सबै प्रदान गरेर तिनीहरूलाई मदत गर्न सक्छौं भने हेर्न, को मानिसलाई मदत र हाम्रो दौड सुरक्षित गर्न हो। Autobots रोल आउट!
बेन 10 बेन 10 बेलुन सङ्कलन र शैली मा स्तर पूरा, आफ्नो शहरी जीप मा एक ड्राइव लागि बाहिर छ
बेन 10 एटीवी भागन
उहाँले छिटो उहाँले आफ्नो आगो समय तपाईको सहयोगको आवश्यक उहाँले आफ्नो एटीवी मा सक्छन् रूपमा सवारी मदत 10 भाग्ने बेन खतरा र शत्रु चकमा
मजा बेन 10 ड्राइभ खेल। आफ्नो बाइक ड्राइभ र छिटो सकेसम्म लागि सबै स्तर पूरा गर्नुहोस्।
बेन 10, वेन, अधिकतम वा केविन रूपमा दौड। प्रत्येक दौड मा प्रथम पूरा गर्न आफ्नो weapons.Try प्रयोग गरेर आफ्नो सँगी racers बिट र विदेशी बाल्स collext